Xiddig ka tirsan Kooxda Manchester United oo markale laga helay Korona Fayras – Gool FM
(Manchester) 15 Nof 2020. Sida wararku ay sheegayaan xiddiga ku cusub kooxda Manchester United ayaa markale laga helay faafaha Korona Fayras.
Xulka qaranka Brazil ayaa xaqiijiyey in daafaca Alex Telles markale laga helay KOFID 19, kaddib tijaabadii la marsiiyey, taasoo ka dhigan in kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford aysan dhowaan heli doonin adeegga daafacan garabka bidix.
Guilherme Arana ayaa haatan loo wacay si uu Alex Telles uga bedelo booska xulka qaranka Brazil, maadaama markale laga helay Korona Fayras.
Arrintan ayaa dhabar jab kale ku ah Tababare Ole oo dhowaan uu kooxdiisa ka dhaawacmay xiddigii Alex Telles ay isku booska ahaayeen ee Luke Shaw, waxaana hoggaaminaya reer Norway uu u baahan yahay in kulammada soo aaddan uu daboolo booskaas.
Kooxda Real Madrid oo dhaqan galineysa mushahar dhimis cusub... (Markii hore 10%, haddana 15%)